2013 August - All Things Myanmar Burmese
‘အထက်’ ကတဲ့လား …. ကျွန်တော်တို့ ပရဟိတအဖွဲ့အစည်းများ၊ လူမှုရေးအသင်းအဖွဲ့များ၏ အများပြည်သူ လူထုတို့အပေါ် ဗြဟ္မစိုရ်တရားလေးပါး လက်ကိုင်ပြုပြီး သီလလုံခြုံစွာဖြင့် အနစ်နာခံ ပေးဆပ်မှု
ကာလကတ္တားကို ရောက်ခဲ့တုန်းက ပဘက်ဖောင်းပေါ်မှာ ကြက်တွေငှက်တွေ အိပ်တန်းဝင်သလို နေထိုင်စားသောက်ကြတဲ့ သူတို့ဆီက လမ်းဘေးလူတန်းစားတွေကို တွေ့လိုက်ရတဲ့အခါ မှိုချိုးမျှစ်ချိုး မဟုတ်သော်ငြား တအံ့တသြ
Sexiest Htet Htet Moe Oo
ဝိတ်တွေချပြီး အရမ်းလန်းနေတဲ့ ထက်ထက်
ဆွေတာ် မျိုးတော် အပေါင်းတစ်သောင်း
တပ်မတော်ကာကွယ်ရေးဦးစီးချုပ် မင်းအောင်လိူင်၏ ညီ အရင်း၊အရက်သမား ဇေယျာလိူင် ———————————————————————– ဖြစ်စဉ် အကျဉ်း လမ်းမတော်၊စံပြမှတ်တိုင်၊ ရုပ်ရုင်ရုံ ဘေးတွင် မူးလဲကာမှောက်နေ သော စုပ်တီးစုပ်ပြတ် ခြေအိပ်တဖတ် သာ စွတ်ပြီးလက်မောင်းတွင်
ဓာတ်ပုံ- ကိုမြင့်ဦး နှောင်းခဲ့လေသည့် ဂုဏ်ပြုလွှာ ————- ရေးသားသူ- ထွန်းခိုင် “သူတည်းတစ်ယောက် ကောင်းဖို့ရောက်မူ သူတစ်ယောက်မှာ ပျက်လင့်ကာသာ ဓမ္မတာတည်း…” အနန္တသူရိယ ပုသိမ်မြို့၏အနောက်ဘက်ရှိ အနည်းငယ် မသေမသပ်ပုံစံပေါက်နေသော အိမ်လေးဆီသို့ မျှော်လင့်မထားသည့် ဧည့်သည်အချို့ ယခုနှစ်သြဂုတ်လအတွင်းက ရောက်ချလာသည်။ သူတို့လက်ထဲတွင်တော့ သစ်သားဘောင်ကွပ်ထားသည့် အဖြူရောင်စာရွက်တစ်ခု ပါလာသည်။ အိမ်ထဲရှိ စိတ်ဝေဒနာခံစားနေရသည့် အမေအိုသည် အိမ်မကြီးနှင့် အိမ်ရှေ့အဖီအကြား အမိုးနှစ်ခုဆီမှ ထိုးကျနေသော အလင်းရောင်ကိုအားပြုလျက် စာရွက်ပေါ်မှ စာသားများကို အားစိုက်ဖတ်လိုက်သည်။ ဧည့်သည်ယူလာသည့်စာရွက်ကတော့ လွန်ခဲ့သည့် ၂၅ နှစ်ကျော်ကတည်းက ပညာသင်ကြားရန် အိမ်ကထွက်ခွာသွားသည့် သူ၏သားဖြစ်သူတစ်ယောက် ဒီမိုကရေစီနှင့် အမှန်တရားအတွက် အသက်စွန့်သွားခဲ့ခြင်းကို ဂုဏ်ယူဝမ်းနည်းကြောင်း စာနာသူအချို့ပေးပို့သည့် ဂုဏ်ပြုမှတ်တမ်းဖြစ်သည်။ သူ၏သားဖြစ်သူသည် လွန်ခဲ့သည့် ၂၅ နှစ်ကျော်က ဖြစ်ပွားခဲ့သည့် နာမည်ကျော် […]
မဟာရန်ကုန် ရွှေမြို့တော်ကြီးက အကောင်းဆုံး အစားအသောက် စာရင်း ၁၀၁” ၁. တရုတ်တန်း ကိုကိုညီညီ ထမင်းကြော်ဆိုင်က ဝက်သားကြော်နဲ့ ချဉ်ပေါင်ကြော် ၂. ၁၅လမ်းထိပ် ကိုဆယ်သန်းဆိုင်က ဝက်သားလုံးယိုးဒယားဟင်းချို ၃. ဆင်မလိုက်လမ်းဆုံက ဝက်သားစပယ်ရှယ်ထမင်းကြော် ၄. လှည်းတန်းဗဟိုလမ်းက ပြည် ဒေါ်ဥထမင်းသုပ်နဲ့ ဆိတ်သားကြော် ဆိတ်သားလုံးကြော် ၅. ဝက်လယ်သမားဟင်း သဘောင်္သီးထောင်း@ ပန်းစွယ်တော် Thai Express ၆. မင်းလမ်းမုန့်တီ က ရေချိုပုဇွန်မီးဖုတ်သုပ် နဲ့ ငရုပ်သီးငါးပိဖျော်…. ၇. မြေနီကုန်း ရှမ်းကုန်းလမ်း သီရိဝဏ်းတား က ယိုးဒယားဝက်သားသုပ် ၈. ဆာ့ခုမ် အမဲလျှာနဲ့အမဲခြောက်ထောင်း ၉. Green Curry Seafood Spaghetti @ Coffee Circle ၁၀. […]
Posted in Articles, Food | No Comments »
http://lady.tut.by/news/supranational-2013/363296.html?fb_action_ids=503337963086202&fb_action_types=og.recommends&fb_source=aggregation&fb_aggregation_id=288381481237582#view/14286 .. link လေးကို ဖွင့်ပြီး photo အောက်မှာရှိတဲ့ လေးကို click နှိပ်ပေးပါနော်..♥♥♥ နေ့ စဉ်မဲပေးနိုင်ပါတယ်… သြဂုတ်လ ၂၆ ရက်နေ့က စပြီး မဲစပေးလို့ ရတာဖြစ်ပြီး စက်တင်ဘာလ ၄ ရက်နေ့ ၁၂း၀၀ နာရီ အချိန်ထိ မဲပေးလို့ ရပါတယ်… (Chrome ကနေ မဲပေးပြီးပေမယ့်လည်း Firefox နဲ့ဖွင့်ပြီးမဲ ပေးပါကလည်း မဲပေးလို့ ရ သဖြင့် Browser မတူ ပါက မဲ ထပ်ပေးလို့ ရကြောင်း အသိပေးချင်ပါတယ် ရှင့်…..) Credit to : ခင်ဝင့်ဝါ’s facebook
Posted in Asia Entertainment, Beauties & Hunkies & Couples, Myanmar/Burmese |2Comments »
You are currently browsing the All Things Myanmar Burmese weblog archives for August, 2013.